बुद्धिजीवीहरुप्रति ओलीको आक्रोश : विकासको कुरा गर्दा महेन्द्रपथमा गयो भन्दिने !
काठमाडौं १० वैशाख–प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विकासको कुरा गर्दा आफूलाई महेन्द्र पथमा गएको भनेर आरोप लगाइएको गुनासो गरेका छन् । उनले राम्रो कुरालाई राम्रो भनेर लेख्न बुद्धिजीवीलाई सुझाव दिए ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले रेल र पानीजहाज चलाउने कुरा गर्दा व्यङ्ग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘मैले रारा ताल गएर सम्वोधन गरे, कतिपय बुद्धिजीवीले राराताललाई महेन्द्र ताल भन्दिएको छ, कठै ! म राराताल गए भन्दैमा महेन्द्रको ताल भन्दिने । महेन्द्र जन्मिनु भन्दा करोडौ बर्ष पहिले पनि ताल थियो’ ओलीले भने, ‘विकासको कुरा गर्दा महेन्द्र पथमा गयो भन्दिने ? विकास भनेको महेन्द्रपथ भन्ने बुद्धिजीवीको सर्टिफिकेट पनि गज्जब छ ।’
ओलीले एमाले पार्टी स्वीमिङ पुल नभइ महासागर भएको बताए । ‘विचार, सिद्धान्त, नीति संगठन, जनविश्वास, आशा भरोसा, कार्यक्षमताको हिसाबले एमाले सानदार पार्टी हो’ ओलीले भने, ‘जहाँ नेपाली छन्, त्यहाँ एमाले छ । एमाले पुगेर संगठित गरेको पनि होइन ।’
अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियताको सवालमा एमालेको कुनै आक्रोश र उत्तेजनाबाट प्रभावित नभएको बताए । ओलीले नेपालमा सामाजिक विद्वेष फैलाउन केही शक्तिकेन्द्रले खेलिरहेको बताए ।
‘हतियार बेच्नका लागि नेपालमा अस्थिरता निम्ताउन खोजिएको छ’ओलीले भने, ‘द्न्दवका व्यवसाय नेपाललाई चाहिएको छैन, हामी मिलेर बस्छौ ।’
बैशाख १०, २०७५ मा प्रकाशित
कांग्रेसको चुनौती– क्षमता छ भने बीपी राजमार्गलाई केपी ओली राजमार्ग बनाउनुस्
नक्कली र प्यारोडी अकाउन्टमाथि निगरानी काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालमार्फत् जनताका गुनासा र समस्या सुन्दै आइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको हेल्लो सरकारले आफ्नै आधिकारिक ट्वीटर हयान्डलबाट सोमबार एउटा ट्वीट गर्‍यो । ...